मनोरञ्जन/कला – Radio Madi
अब के होला अबस्था नेपाल आईडल को?
obhandari Nov 29, 2018 0
मलेसियामा ज्यान बचाउनै गाह्राे(भिडियो सहित)
नेपाल आइडलबाट निलिमा थापा बाहिरिनुको रहस्य खुल्यो( भिडियो सहित)
प्रेम आलेको “एक हजारको नोटले ”सार्वजनिक( भिडियो सहित)
सर्जकको नाम सहायकमा जोडिएपछी प्रहरीमा उजुरी(भिडियो सहित)
obhandari Nov 23, 2018 0
नारायण भट्टराई,७ मंसिर २०७५ नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा बेलामा मौकामा बिभिन्न बिवादहरुले चर्चा पाउने गर्छन । कहिले गाएको पारिश्रमीक नपाएको बिवाद चर्चामा आउँछ, त कहिले स्रष्टा वा सर्जकको नाम नै नराखेर बिवाद चर्चामा आउँछ । आज हामी एउटा…
भरतले भने ‘गाँठो पार्देउ कि डोरीले'( भिडियो सहित)
अर्जुन बि.क., मंसिर ५ । मंसिरको महिनालाई लगनको महिना पनि भन्ने गरिन्छ । कति जोडि यो महिनामा आफुले मन पराएको मान्छेसंग विवाह बन्धनमा वाँधिएर खुसि हुन्छन् भने, कति जोडि आफुले मन पराएको मायालुबाट टाढा पनि हुने गर्छन् । तर प्युठानी गायक भरत…
‘मैले पहिलो पटक गाडी देखेको, भर्ति हुन जाँदा सुनौली कटेसी हो’ : गौचन
नारायण भट्टराई,४ मंसिर काठमाण्डौ अग्रजहरुको कुराकानी समेट्ने कार्यक्रम गाउँबस्तीका कथाहरुको नया शृङ्खला सार्वजनिक भएको छ । पोखरा महा नगरपालिका १७ मा बसोबास गर्दै आउनु भएका पूर्ण बहादुर गौचन सँग गरिएको कुराकानीमा बिगतमा हुने गरेका रिति…
‘तिमी अनि म’रोधीमा भेटिदां( भिडियो सहित)
obhandari Nov 19, 2018 0
कामना डेली मंसिर ३ । नेपाली परम्परामा रोधिको छुट्टै महत्व छ । एक जोडी रोधिमा भेटिँदा के कस्ता बार्तालाप हुन्छन् भन्ने कुरालाई देबी म्युजिकले पछिल्लो समय बजारमा ल्याएको 'तिमी अनि म' गीतबाट पाउन सकिन्छ । निश्चल दवाडी र सरिता सारु मगरको…
राम जी ले मुख खोलेरै भने’जांदा भेटम्ला'( भिडियो सहित)
नारायण भट्टराई,२ मंसिर २०७५ काठमाण्डौ पछिल्लो समयमा बियोगान्त गीतहरुले बजारमा रामै् स्थान पाइरहेको बेला राम्जी पौडेल र कसम ठकुरीको आवाजमा रहेको आउँदा जाँदा भेटम्ला गीत डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ । एक दशक संगीतमा खर्चिसकेका राम्जी…
मनमोहन जोशी स्मृति पुरस्कार प्रकाश चापागाईंलाई
obhandari Nov 17, 2018 0
मङ्सिर १, भरतपुर। साहित्य सङ्गम चितवनले आज एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी साहित्यकार प्रकाश चापागाईंलाई मदनमोहन जोशी स्मृति पुरस्कार २०७५ बाट सम्मान एवं पुरस्कृत गरेको छ। सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सङ्गमले नगद…
ढाकारामले कस्लाई भने “स्वार्थी रैछौ” ? (भिडियो हेर्नुहोस)
कात्तिक ३० । सुभारम्भ डिजिटल म्युजिक प्रा.लि.ले पछिल्लो समयमा ढाकाराम बिनाडीको प्रस्तुतीमा रहेको गीत “स्वार्थी रैछौ” सार्वजनिक गरेको छ । गीतमा शम्भु कुवँर सँगै सम्झना भण्डारीको आवाज पाउन सकिन्छ भने शब्द तथा लय सृजना ढाकाराम बिनाडीको रहेको…
मङ्लबार, कार्तिक २७, २०७५ काठमाडौं । तराई मधेसको मुख्य चाड छठ पर्व आज मनाइदैछ । तराई–मधेसको साझा सांस्कृतिक धरोहरका छठ पर्वको मुख्य दिन आज नदी तलाउमा भक्तजनहरुको भीड लाग्छ । सोमबार बेलुकी देखि व्रतालुहरूले निर्जल व्रत सुरु गरेका छन् ।…
प्युठानको डल्लेमा युद्धको झल्को दिने गरि सराएं नाचियो(फोटो फिचर)
obhandari Nov 10, 2018 0
कामना डेस्क, प्युठान २०७५ । तरवार नचाउंदै पंचेबाजाको तालमा नाच्दै देखाइने सराएं प्युठानको प्राचीन र प्रशिद्ध जात्रा हो। खुंदा भाला तरवार ढाल लगायत घरेलु हतियारको प्रयोग गरि युद्धको झल्को दिने गरि सराए नाचिन्छ।परम्परागत रुपमा खेलिदै आएको…